पछाडिको कपाल किन बढ्छ र हटाउने तरिका | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 21/05/2022 11:28 | काटिएको, व्यक्तिगत हेरचाह
पुरुषहरु मा सौन्दर्य को क्यानन को विषय संग सख्त प्रोटोकल को बढि समायोजित गरीन्छ शरीरको कपाल। मानिसले कपालको पीठ भरी दबाब भएको महसुस गर्नुको मतलब यो होइन कि ऊ जबरजस्ती कुनै चीजमा प्रवेश गर्दैन, तर पक्कै पनि ऊ उत्सुक छ। पछाडिको कपाल किन बढ्छ र कसरी हटाउने?
समाधान धेरै छन् र प्रस्ताव गरिएका लगभग सबै अस्थायी छन्। केवल लेजर कपाल हटाउने एक हो जुन लामो समयसम्म शरीरको कुनै पनि भागको कपालको साथ समाप्त हुन्छ। तर प्रत्येक उपचार को प्रविधि इच्छित बजेटसँग मेल खाँदैन, न त यो अलिकति पनि दुख हुने छैन भन्ने ग्यारेन्टी संग।
1 किन पछाडीमा कपाल बढ्छ?
2 पछाडिको कपाल कसरी हटाउने
2.2 Depilatory क्रीम
2.4 लेजर कपाल हटाउने
किन पछाडीमा कपाल बढ्छ?
महिलाको तुलनामा पुरुषको कपाल बढी हुने गर्छ टेस्टोस्टेरोनको उच्च स्तरको कारण, कपालको वृद्धिलाई असर गर्ने हर्मोन। धेरै पुरुषहरू पातलो कपाल वा बाक्लो कपालबाट पीडित हुन्छन्, तपाईको आनुवंशिकतामा निर्भर गर्दछ। तर के निश्चित छ कि तिनीहरू हाइपरट्रिकोसिस जस्तो देखिन सक्छन्, एक रोगविज्ञान जुन जहाँबाट पीडित छ कपाल अत्यधिक बढ्न सक्छ, पछाडि सहित।
महिलाहरू पनि अर्को रोगविज्ञानबाट पीडित छन् hirsutism, जहाँ उनीहरु पनि ए अत्यधिक कपाल वृद्धि उसको शरीरको धेरै भागहरूमा, पछाडि पनि ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। हर्सुटिज्म प्रायः ठूलो रोगको लक्षण वा विकारको संकेत हो।
महिलाहरू पोलिसिस्टिक ओभरी, डिम्बाशयको क्यान्सर, हाइपरथेकोसिस (ओभेरियन उत्पादनमा वृद्धि), एड्रेनल ग्रन्थीहरूमा ट्युमर, कुशिङ सिन्ड्रोम (अतिरिक्त कोर्टिकोस्टेरोइड्स) वा पुरुष हर्मोन निस्कने केही औषधिहरूबाट पीडित हुन सक्छन्। यी सबैले कपाललाई असर गर्छ। यो दुर्लभ छ कि तिनीहरूले यसलाई पछाडि प्राप्त गर्न सक्छन्, तर यो मामला हुन सक्छ।
पछाडिको कपाल कसरी हटाउने
महिलाहरु यसो गरेर आफ्नो कपाल घटाउन सक्छन् चिकित्सा पर्यवेक्षण र तपाइँको हार्मोनल समस्या को एक endocrinologist वा स्त्री रोग विशेषज्ञ को सहयोग संग उपचार। अर्कोतर्फ, तपाईं पनि एक प्रयोग गरेर अतिरिक्त कपाल कम गर्न सक्नुहुन्छ कस्मेटिक वा लेजर उपचार।
कुनै प्रकारको भएमा पुरुषहरूले पनि चिकित्सा पर्यवेक्षण गर्न सक्छन् हार्मोनल वा endocrine असामान्यता। यद्यपि, धेरै जसो अवस्थामा, यो रिसोर्ट गर्न आवश्यक हुनेछ देखिने कपाल मेटाउन सौन्दर्य उपचार।
यो एक सजिलो, छिटो र पीडारहित प्रणाली हो। तपाईंले पहुँच गर्न नसक्ने सबै क्षेत्रहरूबाट कपाल हटाउन मद्दत गर्न तपाईंलाई अर्को व्यक्तिको मद्दत चाहिन्छ। सुरु गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको कैंचीको सहायताले सबै बाक्लो र बाक्लो कपाल काट्नु हो।
सबै भन्दा राम्रो समीक्षा पछि को मद्दत संग गर्न सकिन्छ सेभिङ मेसिन जसको टाउको सेटमा धेरै कटआउटहरू छन्। ध्यान राख्नुहोस् कि रेजरले दाढी गर्ने यसले पछाडिको कपाललाई पूर्णतया कस्दैन। वास्तविक दाढी ब्लेडको साथ हासिल गरिन्छ र यसका लागि अनुहारमा दाढी हासिल गरे जस्तै गरी गर्नुपर्छ।
हामी प्राप्त गर्नेछौं सेभिङ जेल वा फोम र क्रीमले पूरै पछाडि छोप्नुहोस्। त्यसपछि हामी कपालको दिशा विरुद्ध ब्लेड स्लाइड गरेर दाढी प्राप्त गर्नेछौं, निस्सन्देह, यो अर्को व्यक्तिको सहयोगमा र प्रत्येक समीक्षामा ब्लेड सफा गर्न सिङ्कको नजिक राम्रो छ।
यो सल्लाह छ दाढी पछि नुहाउने कुनै पनि खुल्ला कपाल हटाउन। त्यसोभए तपाईंले क्षेत्रलाई सुख्खा पिट्नु पर्छ ताकि यसलाई धेरै चिढ्याउन नपरोस् सम्भावित जलन कम गर्न सुगन्ध-रहित लोशन लागू गर्नुहोस्।
यो कपाल हटाउने अर्को रूप हो, जहाँ कपाल खौराउने जस्तै हतार गरिन्छ। यी क्रिमहरूमा रासायनिक पदार्थ हुन्छ जसले कपालको केराटिनमा काम गर्छ र यसलाई नष्ट गर्छ। क्रीम कपाल छालामा लागू हुन्छ, केहि मिनेटको लागि कार्य गर्न छोडिन्छ र त्यसपछि यो एक spatula को मद्दतले म्यानुअल रूपमा हटाइन्छ। यस प्रकारको शेभको साथ कपाल बाहिर आउन अलि बढी समय लाग्छ र सधैं जस्तै यो दाढीको लागि कसैलाई मद्दत गर्न राम्रो हुन्छ।
Waxing एक सरल विधि हो, तर यो धेरै पीडादायी हुन सक्छ कि दोष संग, त्यहाँ मानिसहरू छन् जो कपाल हटाउने सहन सक्दैनन्। पक्षमा तथ्य यो छ कि कपाल बाहिर आउन धेरै समय लाग्नेछ।
यो शरीरको कपाल हटाउनको लागि उत्तम विकल्प हो। यो एक महँगो उपचार हो र कपाल बढ्नबाट रोक्न धेरै महिनाको उपचार लाग्छ। लेजर कपालको फोलिकल्स नष्ट गर्न क्षेत्रमा लागू गरिनेछ कपालको वृद्धिलाई रोक्नुहोस् वा ढिलाइ गर्नुहोस्। धेरै जसो केसहरूमा, लेजर कपाल हटाउने सामान्यतया धेरै प्रभावकारी हुन्छ, तर केहि अवस्थामा एक मर्मत सत्र आवश्यक हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पछाडिको कपाल किन बढ्छ र कसरी हटाउने?
जुत्ताको फिता हुनु राम्रो संकेत हो?